Wasaaradda arimaha dibadda oo xaafiis ka furatay Garowe iyo Axmed Karaash oo ka hadlay. – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Sep 9, 2019
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta xariga ka jaray xafiis ay Garowe ka furatay Wasaaradda arrimaha dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Xafiiskaas oo arrimaha Qunsuliyadaha u qaabilsan Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa shaqadiisu noqonaysa fududeynta dukumentiyada qaadashada baasaboorka oo awal loo aadi jiray magaalada Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash oo ka hadlay furitaankii xafiiskaas, ayaa bogaadiyey xafiis ay Garowe ka furatay Wasaaradda arrimaha dibadda, kaas oo fududeynaya dukumentiyo awal safar loo gali jiray.
Xafladda furitaanka xafiiska Wasaaradda arimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa Madaxweyne ku-xigeenka ku weheliyey, xubno ka tirsan golaha wasiirrada Puntland iyo mas’uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Wasaaradda arimaha dibadda iyo Hey’adda socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaaliya.
Safiirka UK ee Soomaaliya oo gaaray Hargeysa iyo kulamo uu la yeeshay Muuse Biixi